Tilmaamaha Si Aad U Hesho Erayada Ugu Fiican Sawirada Instagram ▷ ➡️ Kuwa Raaca ▷ ➡️
Talooyin si aad u heshid jumladaha ugu fiican ee sawirrada Instagram
January 13, 2019 0 comments 1013
Haddii shaygu yahay inaad maalin walba wax ku soo geliso Instagram Waa inaad ogaataa in mid ka mid ah waxyaabaha abuuraya sawir qumman ay tahay inaad leedahay sawir wanaagsan oo dhammaystiri kara muuqaalka. Taasi waa sababta maanta aan kuu siineyno adiga oraahda ugu fiican ee sawirrada Instagram taas oo hubaal kaa caawin doonta inaad ka dhigto astaantaada shay aad caan uga ah oo asal ah.
Waxaan sidoo kale ku caawinaynaa ganacsigaaga ku kobc Instagram.
Talooyinka 4 si aad u heshid jumladaha ugu fiican
Weedhahan waxaad ku hagaajin kartaa macnaha guud ee sawirkaaga, ka dhig macno badan oo siiso taabasho gaar ah mid kasta oo ka mid ah daabacadahaaga. Ka sokow kuwan waa u noqon kara tusaale wanaagsan u ah kuwa ka bilaabaya goobtan iyo u adeega sidii dhiirigelin raadka dadka kale.
Kuwani waa talooyinka ugu muhiimsan ee aad qaadi karto si aad u heshid jumladaha ugu fiican sawirrada Instagram:
1 Weydii fikradaha ama weydii wax
La falgal kuwa raacsan Waxay noqon kartaa wax aad u fudud, waa inaad hubisaa inay dareemaan inay kula soo xiriirayaan sawir, taasina waa sababta weedh aad u fudud ay u noqon karaan wax sida:
Midabkayga aan jeclahay waa midab casaan ah Muxuu yahay midabka aad jeceshahay?
Waan jeclahay xagaaga! Waa maxay xilliga aad ugu jeceshahay sannadka?
Tani waa ____ oo ma eeydaydu / bisadkaygu ma jeceshahay xayawaanka?
Kareemka saxan ee aad jeceshahay?
Maxay jecel yihiin inay sameeyaan markay tahay Christmas-ka?
Dhalasho wacan! Goormay dhalashadaadu tahay?
Jaakad kee baad doorbideysaa? (Tani waxaa lagu dabaqi karaa dhar kasta)
Anigu waxaan ahay taageere kubada cagta, waa maxay isboorti aad jeceshahay?
Jidhkaygu wuu shaqeeyaa, laakiin maskaxdaydu waxay doonaysaa inay xeebta gasho Miyaad leedahay xeeb aad jeceshahay?
Maxaad u aragtaa kooxdayda?
Jimco ayaa timid jirkeyguna waa ogyahay! Maxaad jeceshahay inaad sameyso Jimcaha?
Xusuusnow in waxaas oo dhan loogu talagalay kuwa raacsan waxay dareemayaan kalsooni badan inay awoodi karaan inay kula hadlaan oo uga jawaab mid kasta oo ka mid ah su'aalahaaga sida haddii lagu yaqaanay nolosha oo dhan, tan waxaad ku yeelan doontaa isgaarsiin wanaagsan oo suurta gal ah dhagaysi balaaran mid kasta oo ka mid ah qoraaladaada cusub. Waxaan kuu sheegaynaa sida aad awoodid kala soo bax Instagram toos.
2 Ogow heerka xadka
Xaaladda aadan aqoon, xadka astaamaha ayaa ah 2.200, sidaas waad qori kartaa ku saabsan qaar ka mid ah ereyada 300. Wanaagsan, sax? Waxa ay tahay inaad maskaxda ku hayso waa in sababta oo ah inaad meeleeyn karto qoraal weyn macnaheedu maahan in DHAMMAAN daabacadahaaga waxaad ku qori doontaa qoraal dheer oo sidaas ah. Tani waxay kuu soo afjari kartaa caajiska kuwa raacsan waxoogaa, marka waa inaad aad uga taxaddartaa tan.
Qoraallada noocan oo kale ah way fiican tahay in la dhigo waxoogaa milicsiga shaqsiyeed, heesta qaar ama gabay aan lagaranaynin, waxay sida caadiga ah si fiican isugu daraan sawirrada muuqaalka muuqaalka ah, sawirada farshaxanka ama xusuusta shaqsiyeed ee aad hayso.
Gabaygu wuxuu ku dhammaanayaa inuu yahay ikhtiyaar aad u wanaagsan isla markaana tilmaam wanaagsan waxaad ka dooran kartaa gabay ka mid ah qoraaga aad ugu jeceshahay sidan:
Wax laga qoomamo (Jorge Luis Borges)
Waxaan galay dambiyada ugu xun
In ninku samayn karo. Maan ahayn
faraxsan Taasi waa barafka barafka
I jiid oo i lumiya, naxariis darada.Waalidkay waxay ii dhaliyeen ciyaarta
qatar iyo qurux nolosha,
dhulka, biyaha, hawada, dabka.
Waan u daayay. Maan faraxsanayn. HeshayMa ahayn rabitaankiisa da 'yarta. Maskaxdayda
waxaa loo adeegsaday boodhyada sumadda
farshaxanimada, kaas oo kaabaya dabaasha.Way i dhiibeen. Maan ahayn geesi.
Isagu iima tago. Had iyo jeer dhinacayga
Hooska noqoshada xumaanta.
Emojis runtii waa muhiim marka ay timaado jagada, tan Waxay ka caawineysaa labada weedha iyo sawirku inuu noolaado una noqo wax badan firfircoon kuwa arka. Xusuusnow in emojis yihiin sawirro yaryar oo go'aamin kara ficil, shay ama dareemo iyadoo la raacayo naqshada aad dooratay.
Waqti xaadirkan waxaa jira wax badan oo emojis ah oo adiga gacanta ugu jira si aad u abuurto jumlado aad u tiro badan oo xiiso gelin doona qof kasta oo marin u heli kara nuxurkaaga.
4 Oraah wanaagsan
Mid ka mid ah sawirrada ugu caansan ee sida caadiga ah helitaanka astaanta guud waa iskaa, sawirradan waxaa badanaa la socda weedh wanaagsan oo nolosha ku siin kara muuqaalka aad hadda qaadatay. Talo ahaan waxaad maskax ahaan uga fikiri kartaa inaad doorato jumladda ugu wanaagsan ee weheliso sawirkaaga.
Waxa kale oo aad qaadan kartaa qaar ka mid ah weedhahan aan ku siineyno tusaale ahaan:
Dheh haa, halista qaado oo nolosha ha ku noolaato kaligaa
Suurtagal ma ahan hadda
Adkeysi ayaa bixisa… wax badan!
Raac hamigaaga oo waligaa kama shaqeyn doontid maalin noloshaada
Mararka qaarkood xiriirku wuu dhammaadaa si sheekooyinka jacaylka ay u bilaabaan
Gabadh weyni waa mid qurux badan oo aan lahayn dhaqan xumo
Anigu kama mid ahay hal milyan, waxaan ahay mid ku jira 7 bilyan
Xoog wax yar oo iftiin ah meel kasta oo aad tagtid uga tag
Cadaawayaashu waa kuwa igu dhiirrigeliya
Nin run ah ayaa bixiya, difaaca oo adkaysta
Waqtiga kaliya ee ninku been sheegi karaa waa inuu qof la yaabo
Xanaaq la'aan ma jirto sharaf
Noqo EXTRA si aan caadi ahayn
Waan deg degsannahay, laakiin wadne badan baan qabaa
Ma aaminsani KARTA, waxaan aaminsanahay TODAY
Markay noloshu i siiso liin, waxaan sameeyaa lemonade ka dibna waan iibiyaa
Nasiib ma lihi, waxaan ahay qof karti leh
Sida doollar laakiin aan raadsanayn isbeddel
Dadka aqoonta fiican leh kama muuqdaan buugaagta taariikhda
Fiiri ma ahan wax walba, laakiin waxaan heystaa uun kiis
Dadku waxay dhahaan waxaan u dhaqmaa sidii aniga oo aan dan ka laheyn, laakiin xaqiiqada ayaa ah inaan anigu sidaas ahay.
Waxaan si fudud u dhihi karaa sida qof caqli u leeyahay sababta oo ah nacasnimada ay u maleeyaan inaan ahay
Anigu waxaan ahay qurux, xariif iyo xoogaa qallafsan
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso naafo Instagram.
1 Talooyinka 4 si aad u heshid jumladaha ugu fiican
1.1 1 Weydii fikradaha ama weydii wax
1.2 2 Ogow heerka xadka
1.3 3.Use Emojis
1.4 4 Oraah wanaagsan
Sida fariin toos ah loogu diro barta Instagram
Sida loo abuuro xayeysiiska Instagram, ogow hadda!